Kungcono kangakanani ukukhulelwa ingane?
Odokotela abaningi bavame ukuphika ukuthi kunezikhundla ezikhethekile zokukhulelwa kwengane. Futhi lokhu akukhulumi ngesikhundla, ngesikhala sezindondo ungakwazi ukukhulelwa umfana noma intombazane. Kodwa naphezu kwalokhu, umkhuba waminyaka eminyaka kanye nezingxabano ezithile zesayensi zisho okuphambene, okufakazela ukuthi kunezimo ezihamba phambili ezingahle zihambelane nohlu lwezinkinga zokukhulelwa ngokushesha nokukhulelwa kwengane. Kungenxa yezimo ezinjalo ukuthi sanquma ukukutshela kangcono ngangokunokwenzeka.
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokukhulelwa ingane?
Isiphi isimo esingcono kakhulu sokukhulelwa umquba? Yiqiniso, sonke sazwa ukuthi ungakwazi ukukhulelwa umntwana esesithunywa sevangeli. Ubufakazi balokhu ngucwaningo, ngokusho ukuthi yikuphi kulo mbuzo ukuthi iningi lomuthi linikezwa, eliwela ngokushesha ngokushesha emlonyeni wesibeletho. Ngaphezu kwalokho, ukukhulelwa esimweni sezithunywa zevangeli somntwana kunika amathuba amaningi, ngoba isilwane asikwazi ukuphuma masinyane emkhathini, njengoba, ngokwesibonelo, lokhu kwenzeka ngokujwayelekile futhi kuyaziwa sonke kithi (ikakhulukazi uma owesifazane ephezulu).
Uhamba lapho kungcono ukukhulelwa umfana
Kuvunywa ukuthi kunezimo ezithile ezithinta ubulili bomntwana ongakazalwa. Ngokwezibalo, abazali abafuna umfana, kungcono ukulala ocansini ekuthumeni okuqinisekisa ukungena okujulile. Konke lokhu kuyadingeka ukuze unciphise indlela ye-spermatozoa ene-U-chromosome encane, eqanda. Ngalesi sikhathi, kufanele kucatshangelwe ukuthi i-S-spermatozoa ayiqiniseki ngokuphelele ekukhuphukeni kokushisa, ngakho-ke, ngaphambi kokuba ingane ikhulelwe (okungukuthi umfana), le ndoda akufanele ivakashele izindawo lapho kunezinga lokushisa eliphakeme (isibonelo, ibhuku lokugeza). Kubaluleke kakhulu ukuthi le nkosikazi ingathola i-orgasm ngesikhathi esifanayo nomlingani wayo noma kancane kancane. Lokhu kungenxa yokuthi owesifazane unembeza okhethekile owandisa insimu, ephethe i-chromosome yesilisa, impilo. Futhi isikhathi esihle kakhulu sokukhulelwa ingane encane kuyisikhathi sokuvuthwa.
Ukuhamba kufanelekile ukukhulelwa kwentombazane
Lezi zizathu akufanele zibe zijulile. Lokhu kungenxa yokuthi i-X-spermatozoa inokuqina okucacile ngokuphambene ne-S-spermatozoa. Lezi spermatozoa zinejubane elincane lokunyakaza. Kungenxa yalesi sizathu, ukwandisa indlela yabo, kukhona amathuba amaningi okukhulelwa kweqanda. Ngendlela, owesifazane, uma efuna intombazane, kungcono ukuthi angafinyeleli i-orgasm, ngoba i-X-spermatozoa ihlala isikhathi eside kakhulu ngaphandle kwemfihlo, ikhulisa impilo ye-spermatozoids. Ukukhulelwa intombazane, isikhathi esihle kakhulu singaba cishe kwezinsuku ezintathu ngaphambi kokuvuthwa. Kubaluleke kakhulu ngesikhathi sokuvuthwa kanye nezinsuku ezingu-2 emva kokungahlanganyeli ngokocansi.
Indlela yokukhulelwa ingane engozini?
Akekho ozophikisa ukuthi ukhetho lwe-pos for fertilization luyingxenye yomuntu ngamunye. Kodwa kungcono uma ukhetha ukuthunyelwe ukuze uxhumane nomgogodla wakho wezifo. Lokhu kungenxa yokuthi ukhetho lwe-pos for pregnancy ngqo kuxhomeke kwisakhiwo sesiswini, isifuba somlomo wesibeletho, indawo yesisu kanye nezinye izici zomzimba. Ngendlela, i-pose ayiyona ebaluleke kakhulu ngesikhathi socansi, njengemva kwayo. Ungagxumi ngemuva kwesenzo socansi bese ugijima eshaweni. Kubalulekile ukulala phansi okwesikhashana endaweni enokuthula.
Phakathi nokusakazeka okuvamile kwesibeletho, i-positi engcono kakhulu yokukhulelwa kubhekwa njengabalingani bonke, okuwukuthi ngemuva kokuba isenzo socansi silele ngemuva kwakho okwesikhashana ngomcamelo ngaphansi kwamadokodo.
Themba esiswini sakho emva kocansi, kunconywa uma lesi sibeletho siphelile. Kodwa uma umlomo wesibeletho uguqulwa ube yi-stannum, kufanele ulale ngaseceleni kwakho, lapho uphendukile khona. Zonke lezi zici ngokuqinisekile zifanele ukwazi kokwazi.
Yini engavunyelwe kakhulu ukuyenza
Uma unquma ukukhulelwa ingane, ungabi nobulili emanzini futhi ubhabhe eshisayo ikakhulukazi. Lokhu kungenxa yokuthi izinga lokushisa eliphakeme linciphisa inani le-spermatozoa yeselula. Futhi, zonke izindlela zokugeza (impofu, indawo yokugezela, indawo yokugeza, njll) kunciphise kakhulu amathuba okuthola ukulindelwa isikhathi eside emndenini.
Injabulo enkulu kunazo zonke kwezobulili, kuyini?
Yini okufanele ngiyenze uma ngiphula ikhondomu?
Inombolo nekhwalithi yezocansi emshadweni
Ukuzivocavoca kwemisipha yesisu
Kungenzeka yini ukuthi ulale ucansi nge-cystitis?
I-Technique ye-massage esondelene
Grass mountaineum pochechuyny, izakhi zokwelapha
VEGETABLE VEGETARIAN Ukudla
Luhlobo luni lwabantu ebomini olungenangqondo?
Indlela yokwenza i-postcard enhle yeNyaka Omusha ngezandla zakho, isigaba somsebenzi nesithombe
Izingozi zokungezwani komzimba ezinganeni
Ukubeletha ngokuhlanganyela nomyeni wakhe
Izakhiwo zokwelapha nezomlingo we-pyrope
Izimfihlo zaseCfinish cuisine
Ama-muffin ama-egg ane-bacon
Izinto eziyisithupha ongenakuzenza nengane
Ungabheka kanjani encane kuneminyaka yabo ekugugeni?
Ubulili ngaphambi kokunqoba
Isipho esingcono kakhulu sensizwa
Indlela yokwenza i-lilac yobuhlalu
Indlela yokufeza ukulala okunembile nokuphilile